Puntland oo sheegtay in caawa wixii ka dambeeya ay MD Farmaajo oo aqoonsan doonta madaxweynihii hore | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Puntland oo sheegtay in caawa wixii ka dambeeya ay MD Farmaajo oo...
Puntland oo sheegtay in caawa wixii ka dambeeya ay MD Farmaajo oo aqoonsan doonta madaxweynihii hore
Wasiirka Warfaafinta maamul goboleedka Puntland Cabdilaahi Cali Xirsi Timacadde oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahiyay sababtii keentay in uu fashilmo Shirkii dhawaan kusoo dhamaaday Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug.
Wasiirka waxaa uu sheegay in Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ahaa maskaxdii ka dambeysay in uu fashilmo shirkaasi ka dib markii uu diiday in uu ka tanaasulo gobolka Gedo.
Wasiirka ayaa sheegay in Madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Galmudug ay dadaal badan ku bixiyeen laakiin ugu dambeyntii ay ku fashilmeen markii uu ku dhegay gobolka Gedo.
Waxaa uu tilmaamay in caawa wixii ka dambeeya Puntland ay u aqoonsan tahay Madaxweyne Farmaajo in uu yahay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya , maadaama uu dhamaaday waktigii la doortay.
Timacadde ayaa yiri “Caawa wixii ka danbeeya Farmaajo waxaan u aqoonsanahay ‘Madaxweynihii hore”.
Dhanka kale dowlad goboleedka Puntland ayaa ka jawaabtay hadalkii madaxweyne Farmaajo uu shalay ka hor sheegay kulankii xildhibaanada golaha Shacabka, kaasi oo uu ku sheegay in heshiiskii doorashada ee 17-kii bishii Sagaalaad ee sanadkii hore lagu saxiixay magaalada Muqdisho uu soo qortay madaxweynaha Puntland.
Wasiirka warfaafinta Puntland, Cabdullaahi Cali Xirsi Timacadde oo warbaahinta maanta la hadlay isagoo ku sugan Dhuusamareeb ayaa sheegay in hadalka madaxweynaha uu yahay “gef bareer ah”, isla markaana uu ugu gefay madaxda dowlad goboleedyada oo uu kamid yahay madaxweyne Deni.
“Hadalkaas waxa uu gaf ku yahay madaxweynayaasha maamul gobolleedyadii ka qayb-galay shirka” ayuu yiri Wasiir Cabdullaahi Timacadde.
Next articleFaahfaahin:Qarax lagu dilay taliyihii NISA ee Dhuusamareeb